လင်းသက်ငြိမ် ● လွယ်လိုက်တဲ့ကဗျာတွေ (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ အဲ့ကောင် ရေးတဲ့ကဗျာတွေပေါ့ လွယ်လိုက်တဲ့ကဗျာတွေ နရီမသိ စည်းမသိ စက္ကူစတွေကို လေထဲကျဲလိုက်သလို လွယ်လိုက်တဲ့ကဗျာတွေ အဲ့ကောင် ရေးတဲ့ကဗျာတွေပေါ့ နီယိုမသိ ကွန်ဆက်ချူရယ်မသိ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေအတိုင်း နိုင်ငံရေးအမြင်မရှိ အနုပညာအသိမရှိ လွယ်လိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ ချားလ်ဘန်းစတိုင်းမသိ မာမွတ်ဒါဝှစ်မသိ လွယ်လိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ ရေးလိုက်မှဖြင့် ဒီအတိုင်းချည်း ကဗျာမရှိ ပါရမီမရှိ အရာရာနတ္ထိ အောင်ချိမ့်နဲ့မတွေ့ဖူး လှသန်းနဲ့ မတွေ့ဖူးတဲ့ကောင်ရဲ့ကဗျာ လွယ်နေတာဆန်းသလား ဒါကြောင့် အဲ့ကောင်မပေါက်တာ ငွေမရှိ ဆုမရှိနဲ့ ဘယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမှ မတွေ့တော့ အဲ့ကောင် ကဗျာတွေ လွယ်နေတာပေါ့ လွယ်လိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ ပွဲတက်နည်းနည်း သောက်ဝိုင်းနည်းနည်းနဲ့ ဆယ်နှစ်တဲ့ အဲ့ကောင် ကဗျာရေးလာတာ...
မိုးမခရဲ့ လောကဓာတ်ခန်း – Gmail နဲ့ Google Application အသုံးချ လမ်းညွှန်စာအုပ် ထွက်ပြီ (မိုးမခစာအုပ်စင်) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ မိုးမခမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အပတ်စဉ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Google Office Application in the Cloud – ဂျီးမေးနဲ့ ဂူးဂဲ အက်ပလီကေးရှင်း အခြေခံလမ်းညွှန် ဆောင်းပါးများကို တစုတစည်းထဲ စုစည်းပုံနှိပ်ထားတဲ့ စာအုပ် ထွက်ပါပြီ။ မိုးမခစာပေက ထုတ်ဝေပါတယ်။ အုပ်ရေ ၅၀၀။ စာမျက်နှာ ၂၄၀။ တန်ဖိုး ၄ထောင်ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခ၏ မိတ်ဆွေ ဆိပ်ကမ်းသာစာပေဖြန့်ချိရေးက တာဝန်ခံပြီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ဆိုင်ကြီးများကို ဖြန့်ဝေပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှာကြားလိုပါက – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ...
ကာတွန်း လိုင်လုဏ်ရဲ့ ငါတို့ရဲ့ကမ္ဘာ (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကျော်ဟုန်း – ခေါင်းမြီးခြုံလူတန်းစားရဲ့ ဧချင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ အရင်တုန်းက လူဆိုးကြီးတဲ့။ သူ့ ကိုယ်သူ အင်္ဂုလိမာလလိုလို ဖလင်မပါဘဲ ရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်တဲ့ခေတ်မှာ အကယ်ဒမီရှော့ပဲ။ အသားကုန်အော်မှ ကျီးကန်းနဲ့ဥသြ ခွဲနိုင်သမို့အတုလက် အစစ်မှိန်တဲ့ခေတ်မှာ ရင်ကွဲနာကျပစေ အော်နိုင်မှ မော်နိုင်မယ့်ဘဝ။ အေးပါကွာ… ပုဆိုးခြုံထဲ ခေါင်းပုရင်း ရာဇဝင်တေးကို ကိုယ့်နား ကိုယ်ကြားရုံ တခါတလေ အပျင်းပြေဆိုပါ့မယ် အငွေ့ ရှူရင်း ဝမ်းဝရသူအဖြစ်ဟာ ပါရမီဖြည့်ခြင်းသာ ဖြစ်စေတော့။ မင်းတို့ ခေတ်ပဲ ရုပ်ရှင် ဆက်ရိုက်ကြ ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေရဲ့ သရုပ် နောက်ဆုံးထောင့်က ထိုင်ကြည့်နေမယ်။ ။ ကျော်ဟုန်း ၂၀၁၇၀၆၀၂ Photo credit –...
မျိုးတေဇာမောင် ● အီရတ်ကဗျာဆရာမ ဒန်ယာ မီခါအီးလ်ရဲ့ ကဗျာရှည်တပုဒ် (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ ဒန်ယာ မီခါအီးလ်ကို ၁၉၆၅ အီရတ်နိုင်ငံ၊ ဘဂ္ဂဒတ်မှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒတ်တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာပေ ဘီအေ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင် ဆတ်ဒမ်ဟူစိန်ခေတ်မှာ သူမဟာ Baghdad Observer သတင်းစာအတွက် ဂျာနယ်လစ် ၊ဘာသာပြန်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာပဲဒီလိုအရေးအသားတွေကြောင့် ဆာဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ ရန်သူတော်စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အခါသူမ အမေရိကကို ထွက်သွားရတော့တယ်။ မစ်ချီကန်ပြည်နယ် Wayne State University က မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ သူမကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အီရန်-အီရတ်စစ်ပွဲနဲ့ လေးဆယ့်သုံးရက်ကြာခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ ပထမပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲ အတွေ့အကြုံတွေကိုထင်ဟပ်တဲ့ ကဗျာတွေပါဝင်တဲ့ ကဗျာစာအုပ်နှစ်အုပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ သူမကဗျာရေးတဲ့အခါ အဓိကကိုင်တွယ်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ “စစ်” ပါပဲ။...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ နည်းပညာအသစ်နဲ့ ပျံပြမယ် … (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ Related posts ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ လျှော်ကြမယ် ဖွပ်ကြမယ် (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အကြီး အသေးပဲ ကွာတယ် … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အဆင်ပြေတယ်မလား ဒါရိုက်တာကြီး (0)
ဂျူနီယာဝင်း – မီးသတ်ဆေးဗူးဆိုတာ (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ မီးသတ်ဆေးဗူးတွေကို ခုခေတ်မှာ လူတိုင်း မြင်ဖူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ ဆေးရုံများ စသော နေရာတိုင်းမှာ မီးလောင်လျှင် အလွယ်တကူ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် အသင့်ဆောင်ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရုတ်တရက် မီးလောင်တာမျိုး ကြုံကြရရင် မီးသတ်ကားတွေ မလာခင် မီးသတ်ဗူးနဲ့ ငြိမ်းသတ်တဲ့ အခါ အပျက်အဆီး နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေပါတယ်။ ထို့အပြင် မီးကူးစက်မှုကိုလည်း ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ အဲသည်လို အသုံးဝင်တဲ့ မီးသတ်ဗူးများကို တီထွင်သူမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ပညာရှင် ဂျော့မန်ဘီ ( George Manby ) ဖြစ်ပြီး ၁၈၁၆ ခုနှစ်က တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။...
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ နှင့် မောင်ရန်နောင် ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ မောင်ရန်နောင် တယောက် မြို့တော်ခန်းမရှေ့က ဖြတ်လျှောက်ရင်း ကြည့်လိုက်တော့ ဗီနိုင်းဘုတ်အဖြူကြီး ထောင်ထားတာ သွားတွေ့တယ်။ ဘာလဲဟ လို့ မျက်မှန်ကို ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်တော့ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ တဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက အဲဒီလိုနေ့မျိုးဆို စာစီစာကုံးတွေ ပြိုင်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုတော့ ဘာတွေများ လုပ်မှာလဲ ဆို အနားတိုးကပ်ကြည့်တော့ ဒီနှစ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က ပလပ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုကို တိုက်ဖျက်ကြစို့တဲ့။ ကမ္ဘာမှာ ပလပ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် လူတွေ၊ သတ္တဝါတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာ မနည်းပါဘူး။ မောင်ရန်နောင် ပလပ်စတစ် အန္တရာယ်ကို ဆရာမဂျူး ကလျာမဂ္ဂဇင်းမှာ စရေးကတည်းက ဖတ်ဖူးခဲ့လို့ ပလပ်စတစ် အန္တရာယ်ကို...
Photo – DVB သားကြီးမောင်ဇေယျ – သာလီစွ ရခိုင်ပြည်နယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၈ တဖက်နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ဘူးသီးတောင် ဂူတာပြင် ကျေးရွာမှာ တိတ်တဆိတ် ပြန်ဝင်နေပြီ ။ ဒီသတင်းကို အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက် ပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရတော့ ရုတ်တရက် အံသြသွာပါးတယ်၊ စိုးလည်း စိုးရိမ်သွားပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ မေလ ၂၂ ရက်နေ့မှာပါ။ ဒီသတင်း လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တက်လာပြီး မရှေးမနှောင်းပဲ DVB သတင်းခန်းမှာ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်တဲ့ အသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ သတင်းမှန်ရဲ့လား၊ သတင်းရင်းမြစ်က သေချာရဲ့လား။ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ စတဲ့ စတဲ့ မေးခွန်းတွေ တသီကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် က ပြောတယ်...
နှစ်ပေါင်း ၈၀ သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ နဂါးနီအသင်းထုတ်စာအုပ် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ထွက်ရှိလာ K (မိုးမခစာအုပ်စင်) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၈ နဂါးနီအသင်းကြီးမှ ၁၉၃၈ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသော ပြည်သူ့အာဏာနှင့် ပြင်သစ်အရေးတော်ပုံ အမည်ရတဲ့ စာအုပ်ကို ယခုနှစ်ပေါင်း ၈၀ အကြာတွင် ယဉ်မျိုးစာပေက ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် မေလအတွင်း ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားပါ တယ်။ ပြည်သူ့အာဏာနှင့်ပြင်သစ်အရေးတော်ပုံ စာအုပ်တွင် စာအုပ်အကြောင်း၊ နိဒါန်း၊ ဆွန်ယက်ဆင်ဘာသာ၊ ပြည်သူ့အာဏာ ဟောချက်၁၊ ပြည်သူ့အာဏာဟောချက်-၂၊ ပြည်သူ့အာဏာဟောချက်-၃၊ ပြင်သစ်အရေးတော်ပုံ အစရှိတဲ့အခန်းများပါ ၀င်ပါတယ်။ စာအုပ်မှာ ထူးခြားချက်က ရေးသားသူကလောင်အမည်မပါဘဲ နဂါးနီအသင်းတံဆိပ်သာရိုက်နှိက်ပြီး နဂါးနီအသင်းရဲ့ ၈ အုပ်မြောက်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်လို့လည်း သိရပြီး အသင်းသားများအတွက်သာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့ စာအုပ်အကြောင်း က ဏ္ဍမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ စာရေးဆရာကြီး...
သျှင်မိုးပြေး – ပြဿဒါးနှင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၈ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်လိုပေါ့နှင်း ချစ်သူကို မေ့နိုင်ဖို့ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့်ကြသူတွေလို ပင်လယ်တွေဆီကို လွင့်လာခဲ့တယ် နှင်းကို မေ့လိုမေ့ငြား သောင်ပြင်ပေါ်မှာ နှင်းလို့ ရေးချလိုက်တယ်။ ရေလှိုင်းတွေဟာ အခွေလိုက်ကျနေတဲ့ နှင်းရဲ့ဆံစတွေလို ကိုယ့်ဆီကို အတင်းပြေးလာနေတဲ့အခါ ကျောက်ဆောင် ကျောက်သားလို ပဲ့ကြွေလို့ အဟူးဟူးတိုက်ခတ်နေတဲ့ လေတွေမှာ ကိုယ့်နာမည်ခေါ်သံတွေ အဝေးမှာ နှင်းများရှိနေမလား ကိုယ့်ရဲ့ကမ်းပါးဟာ မဝေးပေမယ့် နှင်းဟာ ဘယ်တော့မှ ဆိုက်ကပ်မလာခဲ့ဘူး ပင်လယ်ဟာ ကိုယ့်မျက်ရည်တွေနဲ့လှိုင်းထန်လို့ နှင်းနဲ့ပစ်ပစ်ခါခါ ဝေးကြဖို့တဲ့လား အလန့်တကြားပင်လယ်ဆီ ပြေးထွက်ခုန်ဆင်းပြီး အော်ခေါ်နေမိတယ် နှင်းရေ.. နှင်းရေ ..နှင်းရေ .. ။...
ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၈ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်နှင့် Green Future Artist Group တို့ပူးပေါင်း၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၅ ရက် အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ်-၇၈ ရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့် တိုက်မှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဟောပြောဆွေးနွေးမည့်သူများမှာ စာရေးဆရာမ ဂျူးနဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်တို့ဖြစ်ပြီး ဆွေး နွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်များမှာ ပလတ်စတစ်ပြဿနာ အဖြေရှာ၊ ပလတ်စတစ်နှင့် ရစ်ပတ်ထားသော ဘဝများတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်...
ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပြောထားပြီးသားနော် … (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH Related posts ကာတွန်း KZZH- အသံက မတိတ်နိုင်သေး (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ မေကြီးကယ်ပါ (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပျောက်သောသူ (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ဆေးမထိုးရင် ပြီးတာပါပဲ (0)
သက်ဝေ – တခါက လက်ဆောင်
သက်ဝေ – တခါက လက်ဆောင် (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၈အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ တံခါးအဝက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဖဲကြိုးအနက်ရောင်စည်းထားတဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်တစ်ခုကို မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့လိုက်ရတယ်။ တွေ့တွေ့ခြင်း ဒါဟာ လက်ဆောင်ထုပ်ရယ်လို့ အတတ်ပြောနိုင်တာကလည်း သေသေသပ်သပ် လှလှပပ ထုပ်ပိုးပြီး ဖဲကြိုးနဲ့ ပန်းပုံဖေါ်ပြီး စီးနှောင်ထားတာကို မြင်လိုက်ရလို့ပဲ။ ရုတ်တရက် ကောက်ယူမယ် ပြင်ပြီးမှ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီး လက်ကို အသာ ပြန်ရုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအထုပ်ကလေးကို သေသေချာချာ ကြည့်နေမိတယ်။ လေးထောင့်မကျတကျ လက်တစ်ဝါးသာသာအရွယ်ရှိတဲ့ ရှည်မျောမျော လက်ဆောင်ထုပ်ကလေးဟာ ဖဲကြိုးအနက်ရောင်ကို ပန်းပွင့်ပုံပေါ်အောင် ခွေလိပ် ချည်ထားရုံသာမက ထုပ်ထားတဲ့ ထုပ်ပိုးစက္ကူကလည်း အနက်ရောင်နဲ့ပဲ။ အနက်ရောင်မှ ဘာအစက်အပြောက်၊ ဘာအဆင်ဒီဇိုင်း၊ ဘာပန်းပွင့် တစ်ပွင့်တလေမှ...
than htay maung စိုးခိုင်ညိန်း – အဲဒါက မမြင်ကွယ်ရာမှာ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၈ မြင်ရတာကတော့ ပျော်စရာချည်းပါပဲ မြင်ရတဲ့ နေရာအထိ သွားရှာတော့ မြင်ရတာက နောက်တနေရာ ရောက်သွားတယ် မျက်စိမှိတ်လိုက်ရင် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအစပ်ကို ရောက်သွားမှာလား ပင်လယ်ကမ်းခြေရောက်အမှတ်တရတဲ့ အသားကပ်အောင် စိုရွှဲနေတဲ့ အလွှာပါးပါး အတွင်းသားထဲ အထိ စိုက်ရောက်သွားတယ် မြင်ရတဲ့ အရသာက ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ရေကူးကန်ထဲက ရေရဲ့အအေးဓာတ်ထဲမှာ အင်းယားကန်ဘောင်က ခုံလေးပေါ်က အထိအတွေ့ ပန်းခြံထဲက သစ်မြစ်ပေါ်မိုးထားတဲ့ ထီးတချောင်းအောက်က အေးမြမှု မဒမ်တူးဆော့ပြတိုက်ထဲက ဖယောင်းရုပ်တုပေါ်က အပြုံး နယူးယောက်လမ်းမပေါ်က ခြေလှမ်းကျဲကျဲတွေ နှင်းရည်စိုရွှဲနေတဲ့ ချယ်ရီပန်းရနံ့ ပါးပေါ်က တင်းနေတဲ့ အရေပြားကို...
စည်သူဇေယျ – အကျဉ်းထောင်ထဲက အမှတ်တရများ (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၈ အချိန်က ၂၀၁၁ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကျင်းပ ပြီး နောက်တစ်နေ့ မိန်းဂျေးက ခေါ်တွေ့တယ် ။ အပွင့်၃ပွင့်နဲ့ ထောင်ဦးစီး၊ ထောင်မှူး နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ၊ သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ နှစ်ရှည် အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးပေါင်း ၁၀ ယောက် ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ ကိုယ်က ပထမ ၂ မှု အတွက် ၈ နှစ် ချခံထားရတဲ့အတွက် အပြာဝတ်နဲ့ ခေါ်တွေ့တဲ့အကြောင်းက တောင်းဆိုချက်ကြောင့် … တစ်ထောင်လုံး ဆန်ကောင်းကောင်း စားရဖို့နဲ့ အဖေနဲ့ တစ်ဆောင်တည်းနေခွင့်ရရေး ပုံစံဆိုတဲ့ စနစ် ဖျက်ပေးဖို့ မရ။ ထောင်ဦးစီးနဲ့ အငြင်းအခုန်ဖြစ်...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Jump Ship (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပလတ်စတစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲ ဇွန်လ ၄ ရက်မှာ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၈ ပလတ်စတစ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းများအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတခုကို Conyat Create အဖွဲ့က ကြီးမှုးပြီး ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့၄၇လမ်း၊ ၄၈လမ်းကြား မဟာဗန္ဓုလမ်းလမ်း၊ အမှတ် G26-49 မှာရှိတဲ့ Urban Village MM ၌ ညနေ ၄နာရီမှ ည ၇နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Plastics Expert တဦးဖြစ်သူ ChuChu ၏ co-founder Friedor က panelist တဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Palu Myanmar , Trash Hero...
မင်းကိုနိုင် – ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ခံစားနာကျင်နေရမည့်ကလေးတွေအတွက် မနှစ်ကရေးတဲ့စာ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ သားနှင့်သမီးရေ … စာမေးပွဲ မအောင်လို့အသက်ကို အလွယ်စွန့်ခဲ့ရသူတွေ ရှိသလို ၊ အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ မွေးပြီး စာမေးပွဲအောင်အောင် ဖြေခဲ့ကြသူတွေအကြောင်း ပြောချင်လို့ စာရေးလိုက်တယ်။ ၁၀တန်း အောင်စာရင်းထွက်တိုင်း နားစွင့် ရင်မောရတယ်။ စာမေးပွဲဆိုတာကို ဘယ်လိုသဘောထားကြသလဲ။ လူ့ဘ၀မှာ စာမေးပွဲတွေ ဘယ်လောက်တောင် ဖြေရမလဲ၊ အောင်စာရင်းတွေ ဘယ်လောက်တောင်မျှော်ရမလဲ။ တို့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွေအပေါ် သဘောထားက အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အနေ အထားရောက်နေပြီလား။ေ သမင်းရဲ့ အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံကို ကလေးတွေ ခံစားရ ကုန်ပြီလား။ အဓိက ကတော့ ဖိအားတွေပဲ။ မိဘနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ဖိအားတွေ...
than htay maung အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ေ ရးတဲ့ က ဗျာ( ၉ ) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ ခေတ်ကြီးက ဟာသပဲ။ ခေတ်ကြီးက ဟာသကိုဖြစ်လို့ ခေတ်က ဟဿရသကိုပေးတယ်။ စစ်က ဘယာနကရသကိုပေးတယ်။ ခေတ် သင်္ခါရ စစ် သင်္ခါရ အချစ်သာ အစဉ်ထာဝရပါခင်။ ခေတ်ကြောင့် ကြေ၊ စစ်ကြောင့် သေ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ စစ်ခွေးက ဟောင်တယ်။ အချစ်က သေ၊ စစ်က ရှည် သေကွဲတွေ၊ ရှင်ကွဲတွေ စစ်ဒဏ်သင့်ပန်းကလေးတွေ နွမ်းနယ်နေတဲ့နှလုံးသားတွေ ဗုံးသံ၊ အမြောက်သံ၊...
K ငြိမ်းချမ်း – ကဗျာဆရာကြီး ညွှန့်သစ် ပြောတဲ့ သမဂ္ဂဆိုတာ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ၊ ကဗျာဆရာ သမဂ္ဂ၊ စာရေးဆရာ သမဂ္ဂ အစရှိသဖြင့် သမဂ္ဂဆိုတဲ့အမည်ကို ဂုဏ်ယူဝင်းပစွာ အခိုင်အမာရှိခဲ့ကြတာကို စာရေးဆရာကြီးတွေ ရေးတဲ့စာအုပ် များမှာရော သက်ရှိထင်ရှားတွေ ပြောပြချက်တွေအရပါ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ခံစားသိတတ်ချိန်မှာတော့ အဆိုပါ သမဂ္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ နှိပ်ကွပ်ချေမှုန်းခံနေခဲ့ရပါတယ်။(အဖွဲ့၊ အသင်း အမည်ပြောင်းခိုင်းတာတွေအပြင် မှတ်ပုံတင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ) ခုများကျတော့ လူ ၃ယောက်ရှိရင်ပဲ ဖွဲ့လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံစံမျိုး ဖြစ်နေမြင်နေရတော့ သမဂ္ဂဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လို ရပ် တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲဆိုတာ သိရဖို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ကဗျာဆရာသမဂ္ဂတွေမှာ ထိတွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အသက် ၇၁နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာကြီး ညွှန့်သစ်နဲ့ မိုးမခ...
သာထက်အောင် – ပျော်ပါသော်ကော ဒုက္ခကမ္ဘာ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ ” ခင်ဗျား – အသက်ကလေးရလာရင် စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အင်တာနက် မကြည့်နဲ့ ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မဖတ်နဲ့ ၊ ရွှေပြည်ကြီးက စိတ်ဆင်းရဲစရာသတင်းတွေ နားမစွင့်နဲ့၊ အကွဲအပြဲ အဆဲအဆိုတွေ များလှတဲ့ မြန်မာအသင်းအဖွဲ့ဆိုတာတွေနဲ့ သွား မပတ်သက်နဲ့ ကိုယ့်လူ။ အဲဒါဆို အထိုက်အလျောက်တော့ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းနိုင်ပါတယ်။” ဒီမှာရောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ရော ၀ါရော နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ သြ၀ါဒပါ။ ခက်တာက ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ပဲ၊ သူပြောသလိုမနေတတ်ဘူး၊ အင်တာနက်လည်းကြည့်တယ် ဖေ့စ်ဘုတ်လည်းဖတ်တယ် (အဲ … ကွန်မင့်တွေတေ့ာ မဖတ်ရဲဘူး၊ တစ်တစ်ခွခွဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းထားတာတွေ ကြောက်လို့ ရွံလို့။)...
မြန်မာစာရေးဆရာကလပ် ဖန်တီးမှုအနုပညာသင်တန်း မြင်ကွင်း ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ စာပေဖန်တီးမှု အနုပညာသင်တန်းသို့ စာရေးဆရာ မောင်သိန်းလွင် နှင့် စာရေးဆရာမဂျူးတို့ လာရောက်သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာကလပ်က ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော စာပေဖန်တီးမှုအနုပညာသင်တန်းသို့ မေလ ၂၉ ရက် နယုန်လပြည့်နေ့က စာရေးဆရာ မောင်သိန်းလွင် က ဆောင်းပါးရေးနည်း နှင့် စာရေးဆရာမ ဂျူးက ဝတ္ထုတို၊ ရှည်ရေးသားနည်းများကို လာရောက်သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ကြသည်။ ဆရာ၊ဆရာမ များ၏ ဟောပြောပို့ချမှုအပြီးတွင် သင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူများက သိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုကိုလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းရှိ အောခစ်...
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ကျင်းပမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စာအုပ်ရောင်းပွဲတော် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ကျင်းပမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စာအုပ်ရောင်းပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၃၄၀)မှာရှိတဲ့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာ ဇွန်လ(၂)ရက်(စနေနေ့) မွန်းလွဲ(၂)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီအထိပြု လုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်ရောင်းပွဲတော်မှာ ဝတ္ထုများ၊ လူငယ်ကြိုက်စာအုပ်များ၊ ဘာသာပြန်စာအုပ်များ အပါအဝင် စာအုပ်ပေါင်း (၁၅၀၀) ခန့်ကို (၃)အုပ်လျှင် (၂၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ သိရပြီး တက်ရောက်လာသူများကို ပြင် သစ်မဂ္ဂဇင်း(၁)အုပ်စီ လက်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ စာအုပ်ရောင်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Institut Français de Birmanie လူမှုကွန်ရက်ပေ့မှာ “စာအုပ်စာပေ ချစ်မြတ်နိုးကြ...
မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း ဇွန် ၂၀၁၈ ၊ တွဲ ၅၊ မှတ် ၂၊ အချိန်မီ ထွက်ပါပြီ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၈ လစဉ် လဆန်းဆိုရင် ထွက်မယ်လို့ အားခဲ ကြိုးပမ်းနေဆဲ မိုးမခဇွန် ၂၀၁၈ မဂ္ဂဇင်း တကယ်ထွက်ပြီ။ အမြို့မြို့ အနယ်နယ်က ဆိုင်တိုင်းမှာ မေးဝယ်ပါ။ ဖြန့်ချိရေးကတော့ – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ ဖြစ်ပါတယ်။ No tags for this post. Related...
Page4of 902«1...23456...902»
>Brooklyn Monastery invites Burmese Htamane Pwe